Linux တွင်ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ utopia | Linux မှ
Linux တွင် convergence ၏ utopia
ခရစ်စတိုဖာကက်စထရို | | applications များ, GNU / Linux များ
convergence အကြောင်း၊ မိုဘိုင်းကိရိယာနှင့် desktop ကွန်ပျူတာတစ်ခု၏ပေါင်းစည်းမှုအကြောင်းကြာမြင့်စွာကြာမြင့်စွာကတည်းကပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ဒီ convergence အကြောင်း၊ Linux ဖြန့်ဝြေခင်းရဲ့ convergence အကြောင်းပြောဖို့တော့ငါမပြောတော့ဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိကွန်ပျူတာများရဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကသေးငယ်တယ်။
ကျနော့်အမြင်ကျနော်တို့မှာဖြန့်ဖြူးမှုဘယ်လိုပဲရှိပါစေပရိုဂရမ်တွေကို install လုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်ဖြန့်ဝေခြင်းများကိုသင်အခြေပြုသည့်စနစ်နှင့်သာကွဲပြားနိုင်သည်။
AppImages သည် executable files များဖြစ်ပြီးထို program ၏မှီခိုမှုအားလုံးကိုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်မှီခိုမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွတ်သဘောနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပရိုဂရမ်ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
အလွန်လျင်မြန်သောဥပမာတစ်ခုပြုလုပ်ရန် Krita ကို၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရယူနိုင်သည် https://krita.org/es/descargar/krita-desktop-es/ Linux tab ကိုနှိပ်ပါ။
စာမျက်နှာမှ .appimage ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် file ကို executable ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းကို graphical ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ နှစ်သက်သော file manager ဖြင့် right-click လုပ်၍ executable လုပ်နိုင်သည်။
တရားဝင်စာမျက်နှာပေါ်တွင် https://appimage.org/ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရှိပါသည်။
Flatpaks များသည် repository ရှိပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဤ option ကို Appimages ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးစေသည်။ Flatpaks တွင် runtime များဖြစ်သောကြောင့် program ကိုစတင်ရန်၎င်းတို့အပေါ်မူတည်သည်။ တိုတောင်းသော၌လိုအပ်သောမှီခိုဖြစ်ကြသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော patch များနှင့်အတူအခြေခံ runtime ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်လုံခြုံရေးရရှိခြင်းအပြင်လိုအပ်သောနေရာကိုနှစ်ဆတိုးသည်။
၎င်းကို install လုပ်ရန်ကွဲပြားသော Linux ဖြန့်ဝေမှုများတွင်ကွဲပြားခြားနားပါသည် https://flatpak.org/getting အကြောင်းအရာပွားရန်မသကဲ့သို့။
ပြီးတော့ applications တွေကိုရှာဖို့ repository လို့ခေါ်တယ် Flathub အရာအများအပြား applications များနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ runtime ရှိပါတယ်။
Flatpak ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် Flathub Solitaire မှဥပမာအဖြစ် install လုပ်ရန်ရေးသည်
flatpak ကို install - https://flathub.org/repo/appstream/org.gnome.Aisleriot.flatpakre
Application ကို Flatpak တွင်ထည့်သွင်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ root password ကိုသက်ဆိုင်ရာ runtime နှင့်အတူ၎င်းကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
Gnome flatpak Solitaire ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ယခု၎င်းကို run ရန်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမဆုံးစတင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်၊ သို့သော်အောက်ပါများသည်ချက်ချင်းဖြစ်သည်။
org.gnome.Aisleriot run flatpak
အနည်းဆုံးတော့၊ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့၊ ပရိုဂရမ်များပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းပရိုဂရမ်များထုတ်ဝေရန်ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသောကြောင့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Flatpak ၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော Canonical ၏ပြိုင်ဘက်သည်လူအများမုန်းတီးခံရပြီးမနှစ်သက်သောသူများဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်ရာထူးနေရာ၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည့် Linux တွင်မတူကွဲပြားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားလုံးကို Linux တွင် application များထည့်သွင်းရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် utopian ခေါင်းစဉ်တွင်ထည့်ထားသည့်အရာအတွက်အလွန်နီးကပ်ပြီးကိရိယာများရှိသော်လည်း GNU / Linux အသိုင်းအဝိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုဝေးဝေးရှောင်ရန်ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ သူမ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Linux တွင် convergence ၏ utopia
သူတို့ရဲ့ erpos မှာ 100% flatpack ရှိသည်ဖို့ deigns သောပထမ ဦး ဆုံးဖြန့်ဖြူးစောင့်ဆိုင်း။
Gnome software ကို အသုံးပြု၍ Gnome နှင့်အတူ Manjaro သည် updates များကိုစီမံရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် yaourt ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုခဲ့ပါ။ -Your -noconfirm
ငါအထူးသဖြင့် Gnome Shell ကိုမကြိုက်ပေမယ့်အရသာအရသာအတွက်အမြဲ။
အက်ဒီ berrios ဟုသူကပြောသည်
သင်ကဲ့သို့သောသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ကြားပို့ချပေးရန်မည်မျှကောင်းလှပါသည်အခြားတဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်သည် (၁၀) နှစ်တာကာလအတွင်း Linux နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိလျှင်ခက်ခဲမှုများကိုပိုမိုခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိသည်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤ Appimages စနစ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်စိတ်ကူးပုံရသည်။ သို့သော်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို download လုပ်ရုံဖြင့်မလွယ်ကူသည့်ဘာသာစကားအခက်အခဲဖြင့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရုံသာမဟုတ်ဘဲရိုးရိုးဒေါင်းလုပ်ခလုတ်ဘယ်မှာလဲ။ မှန်ပါသည်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကအစစ်အမှန်ထိုသို့ထားရန်ရှိသည်! ဤသို့ပြုရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကားအဘယ်နည်း။ အချို့က၎င်းသည်သင့်အားစာသင်ရန်သင်ယူစေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ငါမလိုချင်ပါကအငြင်းပွားမှုနှင့်ထွက်လာသည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အသစ်တစ်မျိုးဖြစ်လျှင်ထိုရည်ရွယ်ချက်သည်အချို့သောရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်ဟုထင်မြင်သောဤသဘောထားများသည် Linux နှင့်၎င်း၏အစပျိုးမှုများကိုလူများ၏ဘုံသို့မရောက်ရှိအောင်တားဆီးလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်အချို့သောရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုသည် - သိသူများ၏အတ္တနှင့်ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်။ »ပြီးတော့စီးပွါးရေးဆိုင်ရာအစပျိုးမှုတွေကိုကာကွယ်ပါ။ ဒါကမှတ်ချက်တစ်ခုပါ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုမသိဘဲကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
eddie Berrios အားပြန်ပြောပါ
ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်သည် Linux တွင် ၁၀ နှစ်ခန့်နေခဲ့ပြီး၊ ကွန်ပျူတာဂုရုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်ယူမှုအနည်းငယ်သာဖြစ်ခဲသော်လည်း၊
ငါအတ္တအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပိုမိုကြောင်း, ငါဆိုသည်ကား, ကပိုအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့် "လွတ်လပ်မှု" ဟုခေါ်သည်။ တာဝန်မရှိ၊ လွတ်လပ်မှုမရှိသောလွတ်လပ်မှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Linux ၌သင်လွတ်လပ်စွာသင်ကြားရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းကြောင့်၎င်းလွတ်လပ်ခွင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သင်၏ OS အသုံးပြုခြင်းအတွက်မည်သို့တာ ၀ န်ယူရမည်၊ ၎င်းလွတ်လပ်မှုရရှိရန်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်သည် Microsoft ၏မူဝါဒနှင့် Apple သည်ထိုအသိပညာကိုသိမ်းယူရန်နှင့်သူတို့၏ "ဖြေရှင်းနည်းများ" အပေါ်တွင်မှီခိုရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့၏အသိပညာကိုထုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာငါတို့ပြtimesနာတွေအတွက်ဖြေရှင်းချက်တွေသုံးပြီးသူတို့နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့တယ်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံတွင်“ မသိသောသူသည်မမြင်ရသောသူနှင့်တူသည်” ဟုဆိုလိုသည်မှာဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဘာသာရပ်၏နီရိုဖိုက်များဖြစ်သည့်အတွက်သူတို့ပြောသမျှအားလုံးကိုယုံကြည်သည် (သို့) မျိုချခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ linux ခံစားနေရပြီး
Ala တစ်စုံနှင့်, လျှပ်တစ်ပြက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမထားဘူး။ ဤစာမူသည်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောကြောင့်အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုကိုချန်ထားခဲ့သည်။ တိုတိုပြောရရင်၊ မရှိဘူးဆိုရင်ဖယ်ထုတ်လို့မရဘူး။
သင်မနှစ်သက်သောကြောင့် snap ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည် manvero သို့မဟုတ် solus ကိုမေးရုံဖြင့် "convergence" အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ချေ။ ဘာသာရေးတစ်ယူသန်ဆန်သည့်သဘောထားဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုသင်မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ဒါဟာ canonical ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေသလိုပဲ။
Ubuntu ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသော operating system အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Ubuntu ကို install လုပ်ချင်ရင်တော့ Ubuntu ကိုသွင်းရမယ်
sudo snapD apt install
ကိုယ့် post ကိုမှထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း။ သငျသညျဖမ်းယူအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးသောနည်းနည်းပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမည်သည့်ဖြန့်ဖြူးအတွက်လက်တွေ့ကျကျအလုပ်လုပ်တယ်။ Linux Files တွေနဲ့ကျွန်တော်မှာအဲဒါကိုသုံးဖို့ပြusingနာမရှိဘူး၊ Flatpack ထက်အများကြီးပိုလေးနက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ option လို့ငါထင်တယ်။
Mr. Robot အားပြန်ပြောပါ
ငါ Snap အကြောင်းကိုအများကြီးမသိရပါဘူး။
Snapd ကို Ubuntu ၏မည်သည့်ဗားရှင်းတွင်မဆိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
Wilson က ဟုသူကပြောသည်
GNU / Linux ၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်သည်၎င်း၏ "မင်းမဲ့စရိုက်" စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတွင်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအမြင့်ဆုံးအထိတိုးတက်အောင်လုပ်သည်၊
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အလွန်ကြီးမားသော Pantheon တစ်မျိုးသည်ဖြန့်ဖြူးမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အလွန်ကွဲပြားသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ "သဘာဝရွေးချယ်ခြင်း" ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖန်တီးသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် Guix GNU / Linux package system သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်အနိုင်ရလျှင်၊ ဖြန့်ဖြူးသူများစွာသည်၎င်းတို့၏ package စီမံမှုစနစ်အတွက်ထို မှနေ၍ အတွေးအခေါ်များရလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရ၊ အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေပြီး၎င်းတို့အားပေါင်းစည်းခြင်းသည် Utopia မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်သာမန်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်းကိုဂရုမစိုက်ပါ။ Application App များတပ်ဆင်ရန်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုသာ App Store နှင့်လုံလောက်သည်။ Packets များအားပြည်တွင်း၌မည်သို့ဖြန့်ဝေသည်ကို၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားသောအရာမဟုတ်ပါ။
စကားမစပ်၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုငါကြိုက်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
Utopia ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Gentoo Linux လို source code ကိုသုံးတဲ့ distros တွေဘာဖြစ်သွားမလဲ။
ထို့ကြောင့်၊ လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုများသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြန့်ဖြူးခြင်းပုံစံကိုရရန်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။
ငါ Flatpak ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီးအက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုလိုရှိတယ်၊ အားလုံးရှိတာလား။
အိုင်ဒီယာသည်အက်ပလီကေးရှင်းများသည် macOS တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ Application ကိုအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါသည့် .app folder တစ်ခုထည့်သွင်းပြီးထည့်သွင်းစရာမလိုပဲ။
ငါအမြဲပြောခဲ့သလိုပဲ (ဒါကငါ့ကိုနည်းနည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်) Apple ဟာအတွေးအခေါ်များနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုများကိုကူးယူခြင်း မှလွဲ၍ အရာရာတိုင်းအတွက်၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏နံပါတ်တစ်ရန်သူ (မိုက်ခရိုဆော့ကကျွန်ုပ်ပြောဝံ့သော)
ဟိုဆေး ရိုဒရီဂွက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ကိုယ်ပိုင် self applications တွေအကြံဥာဏ်ကိုကော်ပီကူးမထားဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက OX မှာအရင်ကတည်းကရှိနေခဲ့သလို OSX မှာ linux လိုမျိုး repositories, homebre, macports (BSD ports ဒါမှမဟုတ် Gentoo portage လိုမျိုး repositories ကိုသုံးနိုင်တယ်) ။ ) ။ ငါ US ကိုရောက်ကတည်းကငါ OSX မှာသီးသန့်အလုပ်လုပ်တယ်၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်မှာ Linux သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါပြောနိုင်တာကအကောင်းဆုံးနှစ်ခုလုံးကအကောင်းဆုံး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ OSX ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းကတော့ BSD ပါ။ ဆာဗာများတွင် linux ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ workstation အတွက် OSX ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။ iTerm20 တွင်မြင်တွေ့ရသောအကောင်းဆုံး terminal သည် Linux ၌အဝေးမှဆင်တူသောအရာမရှိပါ။ မကောင်းသောမိတ္တူများ၊ command များအတူတူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အလိုရှိပါက console အားဖြင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သည်၊ UI ။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်သင် click နှိပ်လိုပါက click ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၌၎င်းရှိသည်။ အကယ်၍ graphical interface ကိုသူတို့အားလုံးထက်ကျော်လွန်လိုပါကသင်၌ရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ console တွင်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်လိုလျှင်သင်၌လည်းရှိသည်။ သငျသညျ OSX နှင့်အတူမပွုနိုငျကွောငျးကို Linux ၌သင်ပြုကြောင်း NORMAL ဘာမှမရှိပါဘူး, ငါအစအ ဦး ၌သင်တို့ကိုပြောသည်သကဲ့သို့ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်မာ (ငါတောင်မှ drivers တွေကိုပြုကြပြီ) အဖြစ်နှစ်ပေါင်း2ကျော် Linux ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ, တစ် ဦး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်နှင့်ပုံမှန်အသုံးပြုသူအဖြစ်, တူညီတဲ့ OSX သုံးပြီး ၅ နှစ်လောက်မှာငါဟာအတွေ့အကြုံအလုံအလောက်ရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ iOS နှင့် Android အတွက်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။ iOS တွင်ပရိုဂရမ်းမင်းသည် Android နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နတ်ဘုရားမဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Linux သည်တူညီသော OSX ဒphilosophနိကဗေဒကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ အားလုံးသည်သာမာန်အသုံးပြုသူအတွက်သာမန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင် download လုပ်လိုပါကသင်ဆင်း။ သင်လိုချင်သောအရာကိုလုပ်ပါ။
Jose Rodriguez သို့ပြန်သွားပါ
၎င်းကိုအကြီးအကျယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်အားလုံးအတွက်ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဗာများနှင့်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ကြီးမားသောနေရာမှလွဲပြီးပရိုဂရမ်တစ်ခုစီသည်အမှီအခိုတစ်ခုတည်း / lib လမ်းညွှန်တွင်ရှိနေခြင်းအစားအမှီအခိုရှိသည့် Linux Windows သို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပြူတာအားမှီခိုအားထားရမည့် Windows ပုံစံအရစင်ကြယ်စွာရှုပ်ထွေးစေပြီး၊ Unified နှင့် standard / lib လမ်းညွှန်သို့နှုတ်ဆက်သည်၊ ဤမှီခိုမှုများစွာသည်ကုန်သွားလိမ့်မည် (၄ င်းတို့အားလုံးကိုအသစ်မွမ်းမံရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်) ။
ယာယီနှင့်အရေးပေါ်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤစနစ်များကိုကောင်းစွာမြင်သည်။ သို့သော်ယေဘုယျဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်အမှီအခိုများနှင့်အတူပရိုဂရမ်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သောမှန်ကန်သောအထုပ်စနစ်များကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။
Open-paperless ဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုရှာဖွေ၊ စီမံရန်နှင့်သိမ်းဆည်းပါ